Abavelisi bempahla eyolukiweyo kunye nabathengisi - China iZiko eliLukiweyo leLaphu
Le yimathiriyeli ye-polyamide omentum, eyenzelwe ikakhulu abasebenzisi abaphezulu. Iindawo eziphambili zokufaka isicelo sale mveliso zizinto eziphezulu zokunxiba, izixhobo zezihlangu, amalaphu angenalukanga kunye nelaphu elidityanisiweyo. Olona phawu lubalulekileyo lwale mveliso kukungena komoya kakuhle. Le mveliso yi g ...
Le yi-omentum eyenziwe nge-PES. Inesakhiwo esixineneyo kakhulu esivumela ukuba ifumane ukuphefumla okuhle. Xa idityaniswe nelaphu, inokuthathela ingqalelo ukomelela kunye nokungena komoya kwemveliso. Rhoqo lisetyenziswa kwiimveliso ezithile ezifuna umoya ophezulu pe ...